Shina Ny Fisaraham-Panambadiana Mpisolovava - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Shina Ny Fisaraham-Panambadiana Mpisolovava
Izy ireo raiki-pitia, na mivoaka ny fitiavana eto
Izany Shina mpisolovava bilaoginy mizara ny fomba fijery eo amin'ny zaza am-ponja ityAmin'izao shina ny Lalàna Hentitra, dia tsy tapaka ny vaovao farany amin'ity bilaogy ity, ary mba hiverina raha toa ianao ka liana amin'ny ara-dalàna ny fanompoana na ny vaovao.
No miatrika ny sarotra am-ponja na famaliana ny olana? Ianao miady amin'ny taloha momba ny zaza am-ponja? Ianao manahy ny ny fiarovana ny ankizy, ny ray aman-dreny ny zon'olombelona sy ny fahafahana hahita ny zanakao? Miaro ny zo sy ny zanany ny tombontsoa tsara indrindra amin'ny fanampiana avy amin'ny manam-pahalalana Shina ny fisaraham-panambadiana ny mpisolovava ao shina ity Lalàna Mafy.
Tsy misy zavatra manan-danja kokoa noho ny iray ny fiarovana ny ankizy sy ny zava-panahy. Amin'izao Shina ny Lalàna Hentitra, ny mpanjifa dia ny laharam-pahamehana. Eto izahay mba hanome torohevitra sy fanohanana tokony hahatratra ny tanjona. Izahay mpiara-miasa miaraka amin'ny mpanjifa, tia manome fanehoana ho an'ny sarotra ny fianakaviana ny lalàna ny toe-javatra, ao anatin'izany ireo izay mahakasika ny zaza ara-dalàna sy ara-batana sy am-ponja. Misy bebe kokoa ireo mpiasa vahiny miasa sy monina ao Shina amin'izao fotoana izao. Izany no azo antoka fa vahiny-pirenena dia afaka hanam-bady sy fisaraham-panambadiana ny-pirenena Shinoa amin'ny fitsarana ny lalàna ao Shina. Amin'ny maha Shina fianakaviana mpisolovava, aho nanontany matetika na vahiny roa teratany dia afaka hanambady na ny fisaraham-panambadiana ao Shina. Araka ny boribory, Maro manan-danja Mikasika ny Fanatanterahana ny Fanambadiana, Fisoratana anarana amin'ny Lalàna navoakan'ny Minisiteran'ny Raharaha Anatiny, roa teratany vahiny afaka hanambady any Shina. Vahiny-pirenena dia tsy maintsy manome ny antontan-taratasy manaraka ireto: ny azy manan-kery ny pasipaoro na hafa manan-kery amin'ny fitetezana iraisam-pirenena ny antontan-taratasy, izay dia asehoy fa lehilahy iray, fara fahakeliny, roa amby roapolo taona sy ny vehivavy o taona ny taratasy fanamarinana ny azy marriageability navoakan'ny notary amin'ny asam-bahoaka na ny fahefana mahefa ny fireneny sy ny fanamarinana ara-panjakana amin'ny masoivoho ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina ao amin'ny fireneny, na nahazo fankatoavana avy amin'ny masoivoho ny fireneny ao Shina, na ny taratasy fanamarinana ny azy marriageability navoakan'ny masoivoho ny fireneny ao Shina taratasy manamarina fa ny lalàn ny firenena, izay ny teratany vahiny avy any manaiky ny fanambadiana voasoratra any ampitan-dranomasina aho, nanome ho eny na inona na inona ny discounted na sliding saran'ny fanao. Izay mety ho satria ny ampahany betsaka amin'ny zavatra ataoko dia ny fianakaviana sy ny lalàna ary ny iray amin'ireo fomba vitsivitsy hanjakazaka olona ao amin'ny maha-tanteraka sy tanteraka eny amin'ny farany lalina tsy dia ohatrinona izany vidiny.
Nanana mpanjifa indray mandeha izay tena nila fanampiana.
Teo aloha ny herisetra an-tokantrano amin'ny fanambadiana (mpanao heloka bevava tahirin-kevitra, izay tsy fahita firy raha oharina ny matetika hitako) ary dia lalandava nataon'ireo taloha izay nitondra hatrany amin'ny valonjato kilaometatra ny fitakiana dia mijanona ao an-trano ny vaovao. Foana niaina eo ambany fandrahonana ny manaiky ny fangatahana momba ny zanak 'na ny olon-kafa. Toy izany ny fandrahonana ao anatin'izany ny sary tena famaritana ny fahafatesana sy ny dismemberment. Eo ambanin'ny lalàna Shinoa, Shina fianakaviana mpisolovavany hiatrika ny raharaha ara-pitsarana momba ny fanambadiana, ny fisarahana, ny fisaraham-panambadiana, ny fanaovana tokantrano maso sy ny zavatra rehetra mikasika ny zanaka, tahaka ny fidirana amin'ny fandaharana sy ny fikojakojana. Izany ihany koa dia midika ara-bola ny fifampiraharahana, prenuptial fifanarahana sy ny lova olana.
Toe-javatra sasany hiatrehana ny mitana fananana sy sarotra olana ara-bola, na avo lenta amin'ny toe-javatra olona malaza.
Fivoaran-draharaha ao amin'ny fianakaviana lalàna dia entin'ny fivoarana eo amin'ny fiaraha-monina, ary na dia ny asa ny fianakaviana lalàna mpisolovava mitaky maranitra ara-dalàna an-tsaina izany ihany koa ny zavatra ilaina ara-tsosialy ny fahaiza-manao toy nahay nandanjalanja sy ny fiaraha-miory.
Fianakaviana lalàna azo lazaina ho toy ny fitambaran'ny eo lalàna sy sosiolojia. Noho ny saro-pady maha-mpanjifa fifandraisana, trainee mpisolovava tsy matetika omena ny avo lenta ny andraikitra, raha oharina amin'ny hafa ara-dalàna ny faritra, na dia izany fiovana toy ny mpisolovava lasa za-draharaha kokoa ary hampitombo ny fahaiza-manao.
Tsy fanambadiana na ny fisaraham-panambadiana dia mora
Na inona na inona ataonao, tsy mamangy ny Boky an-Tariby mba hifidy mety ho fisaraham-panambadiana mpisolovava ao Shina. Shina mpisolovava tokony ho voafaritra tamim-pitandremana. Vola dished avy ho an'ny ny vola lany nandritra izay fisaraham-panambadiana, ny mpampanoa lalàna, dia azo antoka ny fampiasam-bola taty aoriana ny sarobidy ankizy. Noho izany, mitady foana ny fahaiza-manao sy ny fitarainana laza tsara noho ny mety ho mpisolovava tsara. Ianao dia hahita maro mora hita ny toerana mba hitady ny mandinika ny mety ho mpisolovava noho ny fisaraham-panambadiana. Misy ny lalàna rakibolana fantatra amin'ny anarana hoe"Martindale-Hubbell"fa ny lisitry ny sasany dia manokana ny fototra sy ara-batana ny toerana misy ny mpisolovava. Tsy na izany aza, midika hoe lisitry ny fitarainana. Misy mpahay lalàna tokony ho voatanisa ny olona avy amin'ny Aba. Mpisolovava azy dia ho any amin'ny fakan-kevitra voalohany amin'ny antoko raha ny fisaraham-panambadiana saingy tsy ara-dalàna hisolo tena ny antoko hafa raha torohevitra niteny na inona na inona litigant ao anatiny ny fitoriana. Noho izany, ataovy mitranga voalohany ho an'ny fakan-kevitra voalohany indrindra fa raha ny fianakaviana akaiky mpisolovava tena fantatra"Antsantsa."Fifandraisana izay mpahay lalàna avy hatrany. Ny safidy tsara indrindra ho an'ny ny"antsantsa"ny tena ny mpisolovava izay manana traikefa miatrika tsikelikely ny fisaraham-panambadiana. Ao amin ny fanaovana izany, ianao foana ny manana fomba feno kokoa ny fanazavana safidy bebe kokoa raha oharina amin'ny tanora, fiofanana mpisolovava. Ny mpisolovava tsara ny mpihaino, ary hisy ihany koa ny matihanina mpahay lalàna sy ny fifampiraharahana izay voaporofo amin'ny alalan'ny traikefa. Dry zareo mampiseho ny tactical fahalalana ny hita nandritra ny taona maro. Izany olona iray dia na momba ny fiaraha-miory fa tsy manambany anareo amin'ny fandraisana andraikitra ambony amin'ny fomba rehetra.
Mampiasa ny relationally miaraka amin'ny mpahay lalàna sy ho lasa mpanjifa izay mitandrina ny anjara-raharaha momba ny toe-draharaha.
Niara, ny mpisolovava tokony ho iray izay mampiseho ny fikirizana raha tsy fantatrao be dia be momba ny fisarahana am-panambadiana. Indraindray, ny mpampanoa lalàna, mety tsy ho ankasitrahana noho ny vitsy ny tetika ampiasaina mikasika ny mpanjifa. Fa ny tsara eny ary Torohevitra ho faly hazavao ny antony maro ny zavatra tsy maintsy ho tratra ihany raha izany soa izany amin'ny tokantrano rehefa ela ny ela. Ny tena tsara indrindra dia ny mpisolo vava dia tena niaina ny fisaraham-panambadiana mpampanoa lalàna ao amin'ny lalàna momba ny fisaraham-panambadiana, fa ankoatra izany dia mahatakatra ny hetra lalàna, ny fananana ireo soatoavina sy ny tena toetrany ny lalàna. Ny mpisolovava tokony hanana ny fahaizany mba hamaritana ny fanohanana ny ankizy ny teti-bola, ho manam-pahalalana momba ny fisotroan-dronono ny lalàna, ary manana namana ao nanoritra ny fitantanam-bola. Shina Mpisolovava Bilaogy dia mampianiana anareo eo ambanin'ny ny toe-javatra manokana ao amin'ny manaraka fomba: Isan'ora saran'ny fandaharana Kisendrasendra saran'ny fifanaraham Fisaka saran'ny fifanaraham - isan-Jato saran'ny fifanaraham aho fahazoan-dalana Shina mpisolovava. Ny ankamaroan'ny mpanjifa ireo teratany vahiny sy ny orinasa. Shina Mpisolovava Bilaogy mpiara-miasa ao Beijing, Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Suzhou, Nanjing, Qingdao, Fuzhou, Hainan, Hefei, Wuhan, Xian, Changsha, Endrika Hangzhou.
Hianatra bebe Kokoa Izany Shina Mpisolovava Bilaogy dia mikendry ny hanome ny tsara kokoa ny fahalalana sy ny fahatakarana ny lalàna Shinoa ho an'ny vahiny.
Tokony tsy maintsy misy ara-dalàna ny olana ao Shina, aza misalasala mba hifandray Shina Mpisolovava Bilaogy ho an'ny fakan-kevitra. Mialoha ny fakan-kevitra dia maimaim-poana. Koa ara-dalàna ny fanompoana, na izany aza, dia ho voampanga noho ny tahan'ny sy ny tany noho ny mazava ho azy. I petera Zhu, za-draharaha Shina mpampanoa lalàna, ny fahazoan-dalana ho fampiharana ny lalàna bebe kokoa noho ny folo taona, ny mpanoratra ity Shina Mpisolovava bilaogy, mandray na inona na inona enquiry na fakan-kevitra mifandraika amin'ny lalàna Shinoa.
BBC NEWS - Azia-Pasifika - tany Shina ny zon'olombelona mpahay lalàna navoaka
China - Eherecht für Ausländer - Die Kanzlei von Jeremy D. Morley